UNWTO uthuthele eSaudi Arabia Ekubambeni: UNobhala-Jikelele uZurab Pololikasvili Enkingeni Enkulu?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » UNWTO uthuthele eSaudi Arabia Ekubambeni: UNobhala-Jikelele uZurab Pololikasvili Enkingeni Enkulu?
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • I-Saudi Arabia Breaking News • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Ungqongqoshe wezokuvakasha eSaudi Arabia u-Ahmed Al Khateeb. ungumgqugquzeli wangempela futhi ongena shí emhlabeni wezokuvakasha, kanti uNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikasvi kungenzeka aphelelwe ngumsebenzi kungekudala.
Ukunyakaza kwendlunkulu ye-UNWTO kumisiwe, kepha lokhu akusona ukuphela kwendaba okwamanje.
Ukufuduswa kweNdlunkulu ye-UNWTO kusuka eSpain kuya eSaudi Arabia kwathola ukunakwa okuhlukile kweNdunankulu waseSpain uPedro Sánchez kanye noNobhala-Jikelele we-UN u-Antonio Guterres.
TUNdunankulu waseSpain ubeshayele uCrown Prince Mohammed bin Salman Al Saud waseSaudi Arabia, lapho ukuhambisa kwe-UNWTO kungenzeka ukuthi bekuyisizathu esiyinhloko sokubizelwa ikusasa lobudlelwano beSaudi neSpain.
Ngokumangazayo, u-Antonio Guterres, uNobhala-Jikelele naye wabamba iqhaza. Iminyaka yokuvotelwa kwabavoti nguNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikasvili akukaze kubhekwane nayo, futhi isanakwa eNew York. Manje i-SG manje isiyabandakanyeka ngemuva kokuxwayiswa nguhulumeni waseSpain.
Ukungenelela kweNhlangano Yezizwe ukubamba isinyathelo se-UNWTO kuphumelele okwamanje.
ISpain kodwa manje inganquma ukuhoxisa ukwesekwa kwayo nguNobhala-Jikelele uPololikashvili.
Ngokusho kwemithombo i- ukukhohlisa ku Ukuqokwa kabusha kukaJanuwari kukaZurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele we-UNWTO yiKomidi eliPhethe le-UNWTO sekuzovela. Ngosizo lweSpain ukusekelwa kwe-obiously uNobhala-Jikelele ongekho emthethweni angagcina eseqedile.
Ukukhethwa kabusha kweZurab kumele kuqinisekiswe eMhlanganweni Omkhulu waseMorocco ngaphambi kokuphela konyaka. Hhayi iSpain kuphela, kepha amanye amazwe amaningi emhlabeni angaphikisana nokuqinisekiswa kabusha kweZurab ihlandla lakhe lesibili, futhi aqede ngokuphelele ukhetho lwango-2018.
eTurboNews rkubikwe ngokusobala ukuthi uNobhala-Jikelele we-UNWTO akakaze akhethwe ngokufanele nangokomthetho esikhathini sakhe samanje se-2018.
Ukuthuthela kweNdlunkulu ye-UNWTO eSaudi Arabia
Noma ngabe lesi senzo besingakaze sibe yisicelo esisemthethweni ngabakwaSaudis, asikaze sethulwe ngokubhalwa kuHulumeni waseSpain, noma ku-UNTWO, iSaudi Arabia ibibambe iqhaza elibonakalayo nangokusobala ekutholeni ukuthi lokhu kuthutha kufezwe.
Kubonakala sengathi uZurab Pololikashvili wayeqinisekise iSaudi ukuthi izokweseka. Ubuye waqinisekisa ukuthi uyayeseka iSpain. AmaTweets athunyelwe nguZurab akhombisa ukuxhasa kwakhe iSpain asuliwe ukuze kudideke ukuma kwakhe kabili ngalolu daba.
eTurboNews ifinyelele kongqongqoshe bezokuvakasha abaningana emhlabeni jikelele. Bonke bavumile ukuthi ngabe bavotele ukuthuthela eSaudi Arabia, futhi bakwazisa ukwesekwa okwenziwe yiSaudi Arabia kwezokuvakasha zomhlaba.
eTurboNews izingxoxo eziqondile nezingekho emlandweni nongqongqoshe, izinsiza kanye nezinye izikhulu zikuqinisekisile ngokusobala ukwesekwa okukhulu kwevoti elinjalo.
Iphinde yaqinisekisa izinga eliphezulu lamazwe angamalungu okukhungatheka analo nge-UNWTO yamanje.
Ngenxa yokungenelela kweZizwe Ezihlangene, lesi sinyathelo se-HQ kungenzeka ukuthi simisiwe okwamanje, kepha izingxoxo nokuxoxisana ngakho kubonakala kuqhubeka.
Kungathenjwa kuphela ukuthi ithonya laseSaudi Arabia namandla emali kwezokuvakasha okuphephile emhlabeni kuzoqhubeka. Manje ithuba lokuthi i-UNWTO entsha iqine, uhambo olusha olunamandla lomhlaba wonke, kanye nomkhakha wezokuvakasha ukuze uphume kule nhlekelele yamanje.
Njengoba iSaudi Arabia ibandakanyekile kube nethemba emazweni amaningi ancike kwezokuvakasha ngezikhathi zekusasa elimnyama.
ISaudi Arabia ingaba nokuhlakanipha kokuxazulula le nkinga futhi isebenzisane neSpain. Mhlawumbe womabili la mazwe ehlangene angadlala indima ebalulekile ukubuyisa ukubaluleka, ukuma, kanye nokuthonya ukuthi i-World Tourism Organisation kumele iqondise lo mkhakha kulo bhubhane.
UMaría Reyes Maroto Illera (owazalwa ngomhlaka 19 Disemba 1973) nguNgqongqoshe Wezimboni, Uhwebo Nezokuvakasha waseSpain kuhulumeni kaNdunankulu uPedro Sánchez kusukela ngo-2018.
UNgqongqoshe uMaroto ubonakale ebuthaka eSpain. UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseSpain, uReyes Maroto, ekhuluma neCanal Sur Radio ngoMsombuluko, uphakamise ukuthi ukuqhuma kwentaba-mlilo eLa Palma kungaba yinto entsha engaheha abavakashi., ekhuthaza izivakashi ukuba zize.
Namuhla uLava osuka entabamlilo eLa Palma ufike olwandle. Okukhathaza kakhulu iziphathimandla manje amafu anobuthi angafika eCanary Island, adalwe ngokuxhumana phakathi kwedwala elincibilikisiwe nolwandle.
Ubambiswano lokuwina / lokuwina neSaudi Arabia nakanjani luzokwenyusa izinga kungqongqoshe wamanje wezokuvakasha waseSpain.
Kungathathani ukuhambisa i-UNWTO?
Bekuzodingeka amavoti angama-106 ukwamukela ukuhanjiswa kwendlunkulu. Ngokuvumelana ne eTurboNews imithombo, cishe amaphesenti angama-90 ala mavoti ayesetholakele. Kube nokusekelwa okukhulu okuvela e-Afrika, umhlaba wama-Arabhu, kepha naseCaribbean, nakwamanye amazwe aseYurophu ..
Kungani iSaudi Arabia?
Si-audi Arabia Ohlelweni lwayo Lwamaqhinga lwango-2030 kunokuvakasha phakathi kwezinto ezintathu eziseqhulwini.
INkosana uMqhele u-Mohamed Bin Salman uphakamise ukuthi izwe iya kusuka ku-1% wokunikela kwezokuvakasha kwi-GDP kazwelonke kuya ku-10% kuhlelo oluya kuze kube ngu-2030.
Lolu hlelo lwenziwa nguNgqongqoshe Wezokuvakasha waseSaudi Ahmed Al Khateeb.
Maphakathi noSepthemba, uHulumeni waseSpain wahlela ukuvakashela indlunkulu ezayo ye-UNWTO eMadrid, iPalacio de Congresos de La Castellana.
UScretary-General Pololikashvili ubehambele lolu hambo kodwa ngokuhamba kwesikhathi weqa engqungqutheleni yabezindaba ebihlelwe ngongqongqoshe uReyes Maroto noJosé Manuel Albares. Akazange azihluphe ngokuhambela abezindaba noma aphike amahemuhemu ngokushintshwa kwekomkhulu nokweseka kwakhe iRiyadh
Kungaleso sikhathi lapho uhulumeni waseSpain wanquma ukuya ngqo kwi-UN.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, i-UNWTO yahlela isithangami ezweni laseNingizimu Afrika lapho kwakudingidwa khona ukwelulekwa kokwenza umkhiqizo ohlanganyelwe wezokuvakasha kulawo mazwe.
Abamele amazwe angama-47 ase-Afrika bebehambele lo mhlangano izinsuku ezintathu. “Lapho unobhala-jikelele wakwazi ukukhuluma ngasese nabo bonke, futhi ngaphandle kofakazi bakwamanye amazwekazi.
Imali iSaudi Arabia eyayizimisele ukuyifaka kulo msebenzi yayizosebenza kahle kakhulu kuwo wonke lawo mazwe wokuhamba nezokuvakasha.
Ubudlelwano phakathi kweSpain ne-UNWTO abukaze buhluke kepha buhlonipheke, ngokusho kombiko kwabezindaba zaseSpain. "ISpain ivotele uZurab waphikisana nelinye iqembu elibandakanya iphini likanobhala waseSpain."
Iqiniso lokuba nendlunkulu ye-UNWTO ayenzi iSpain inhloko-dolobha yezokuvakasha, okuphambene nalokho abanye abafuna ukukubona.
"Uhulumeni waseSpain akazi neze ukuthi umthethosivivinywa wasendlunkulu ukhokhelwa ngokuzenzekelayo njalo ngenyanga futhi akekho noyedwa othola ngawo ngaphandle kwesikhulu esiyalela ukuthi kudluliswe leli bhange, nokuyinto ezenzekelayo." ISpain ikhokhela indlunkulu ye-UNWTO. Konke lokhu kubiza iSpain cishe ngama-2 Million Euro ngonyaka.
The UNobhala-Jikelele we-UNWTO ukhokhisa ngokufanayo ne-International Labour Organisation (ILO) kanye noMqondisi-Jikelele we-United Nations Development Programme (UNDP): $ 20,000 ngenyanga ngezinkokhelo eziyi-12 zenyanga = $ 240,000. Uthola futhi u- € 40,000 ngonyaka ngezindlu kanye nemoto nomshayeli. Unobhala-jikelele ukhokhelwa yi-UNWTO, hhayi iSpain.
Okukhokhwa yizwe ngalinye ngokuba yilungu le-UNWTO kuncike kwi-GDP, kubantu, nasekuphekeni kwabavakashi okusebenzayo. Lelo nani alikwazi ukweqa u-5% wesabelomali senhlangano.
Amazwe akhokha kakhulu yiFrance, China, Japan, Germany, neSpain, okunikela ngama-euro angama-357,000 ngonyaka. Labo abakhokha kancane yiSeychelles neSamoa, ngemali eyi-16,700 euros ngonyaka.
I-UNWTO kuletha inani elincane kakhulu embonini yezokuvakasha nezindawo lapho ziya khona. Kugxilwe kabi, ngaphandle kwesabelomali -12 million dollars ngonyaka, okuyi-60% yayo iya emiholweni-, nezikhulu eziqokwe amazwe ayo. Inkohlakalo yangaphakathi nokuma kanye nemikhuba emidala engasasebenzi bekulokhu kuyinkinga.
I-UNWTO njengamanje inayo Amalungu we-159. IZizwe Ezihlangene zinamalungu ezwe ayi-193.
I-United States ishiye i-UNWTO ngo-1995, iBelgium ngo-1997, i-United Kingdom ngo-2009, iCanada ngo-2012, ne-Australia ngo-2014.
Futhi, ukungabikho yi-Ireland, iCyprus, iNew Zealand, iLuxembourg, nawo wonke amazwe aseNordic: i-Iceland, iNorway, iSweden, iFinland, neDenmark, kanye namazwe amabili eBaltic, i-Estonia neLithuania enza i-UNWTO ibe yinhlangano ebuthakathaka.
Kuyacaca ukuthi inkomba entsha ye-UNWTO ibalulekile ukuze le nhlangano esebenzisana ne-UN iphile.
Kuze kube manje iSaudi Arabia isaphendulile I-UNWTO kanye Nezokuvakasha Komhlaba zingafani namanye amazwe emhlabeni. Kuzoba nesinyathelo esilandelayo, lokho kuqinisekile.